Man United iyo Chelsea oo isku heysta daafaca bidix ee kooxda Lille Lucas Digne. - Caasimada Online
Home Warar Man United iyo Chelsea oo isku heysta daafaca bidix ee kooxda Lille...
Man United iyo Chelsea oo isku heysta daafaca bidix ee kooxda Lille Lucas Digne.
Indha-indheeyeyaal ka socda labada koox Manchester United iyo Chelsea ayaa jimcadii lasoo dhaafay daawaday 19 jirka daafaca garabka bidix ee kooxda Lille Lucas Digne, markii ay kooxdiisu wajahday Rennes.
Digne, oo usoo ciyaaray xulka France ee ciyaartoyda da’doodu ka yar tahay 17 jirada ilaa 19 jirada, ayaa sanadii lasoo dhaafay helay booska koowaad ee kooxda Lille wuxuuna si wanaagsan uga soo dhex dhalaay kooxda ciyaarta Horyaalka Faransiiska.
United ayaa baadi goob ugu jirta bedelka dooqa koowaad ee daafac bidix Patrice Evra waxayna xagaagan lasoo wareegeen daafaca reer Holland Alexander Buttner.
Chelsea ayaa sidoo kale baacsaneynsa bedelkeeda Ashley Cole oo qandaraaskiisu dhacaayo dhamaadka xilli ciyaareedka.